ကြတ်ဂူဆီသို့ အလည်တစ်ခေါက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြတ်ဂူဆီသို့ အလည်တစ်ခေါက်
Posted by weiwei on Feb 16, 2015 in Creative Writing, Environment, My Dear Diary, Photography, Society & Lifestyle, Travel | 15 comments
wei's photos ကယား အမှတ်တရ
2013 ဒီဇင်ဘာလတုန်းက လွိုင်ကော်မြို့ကို အလည်တစ်ခေါက် ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခြေအနေအရ ကြတ်ဂူနဲ့ ရေတံခွန်ဆီကို မရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် အခု 2015 ဇန်န၀ါရီမှာ လွိုင်ကော်မြို့ကို ဒုတိယအကြိမ်သွားခဲ့ပြီး ကြတ်ဂူဆီကို ရောက်အောင် သွားခဲ့ပါတယ်။
လွိုင်ကော်မြို့ကနေ မိုင် ၂၀ ခန့် သွားရပါတယ်။ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ တောတောင်တွေကို ဖြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ အနဲဆုံး နေ့တစ်ဝက်လောက်အချိန်ယူပြီး သွားရမယ့် နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကို လိုက်ပို့ပေးတဲ့သူက လက်နှိပ်ဓါတ်မီးအကြီးတွေယူလာခဲ့ပေးတယ်။ အထဲမှာ မှောင်တဲ့အတွက် ဓါတ်မီးမပါလို့ မဖြစ်ပါဘူး။
တောင်ခြေတစ်ခုမှာ ကားရပ်ထားလိုက်ရပြီး ကြတ်ဂူအပေါက်ဝဆီကို လှေကားအတိုင်း တက်ရပါတယ်။ တော်တော်မြင့်ပြီး လူသွားလူလာနဲတာ သတိထားမိတယ်။
နေ့လည် ၁ နာရီအချိန်လောက်ရောက်သွားတာမို့လို့ လှေကားအတက်မှာ တော်တော်လေး မောသွားတယ်။ လှေကားထစ်ပေါင်း (၁၃၀) တက်ခဲ့ရပါတယ်။ (credit to nozomi) အမြင့်ကနေ အောက်ခြေဘက်ကို ပြန်မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက အရောင်စုံပြီး လှပနေလို့ အမောပြေပါတယ်။
ဂူပေါက်ဝမှာ စေတီလေးတစ်ဆူနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောင်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အင်ဗာတာနဲ့ မီးသီးတွေ ဖွင့်ထားရတာမို့လို့ မီးအလင်းရောင်အား အလုံအလောက်မရတဲ့အတွက် ဓါတ်မီး မဖြစ်မနေယူသွားဖို့ လိုပါတယ်။
ဂူပေါက်နေ သစ်သားတံတားလေးအတိုင်းဆင်းပြီး ၀င်သွားရပါတယ်။ ကျွန်မအတွက် အခက်ခဲဆုံးကတော့ ဖိနပ်မစီးရတာပဲ။ ဂူအတွင်းပိုင်းအောက်ခြေတွေက နင်းရတာ ကြမ်းနေပါတယ်။ အရမ်းသတိထားရတဲ့အနေအထားမှာ ဖိနပ်မပါတဲ့အတွက် ခြေဖ၀ါးတွေနာတယ်။ သစ်သားတံတားဆုံးတာနဲ့ အထဲကို ဆက်ဝင်ဖို့ အခက်အခဲစတွေ့ပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင် အထဲဝင်ရမှာ ကြောက်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်စိတ် လွှမ်းမိုးနေခဲ့လို့ ကြိုးစားပြီး ၀င်သွားခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းတလား အပျက်အစီးတွေ တွေ့ခဲ့ရပြီး ဂူရဲ့ အမြင့်ဆုံးနေရာတစ်နေရာမှာ အကောင်းအတိုင်းကျန်နေတဲ့ ခေါင်းတလားတစ်ခုကို တွေ့ရတယ်။ ဓါတ်မီးတွေဝိုင်းထိုးပြီး ဇွန်းဆွဲပြီး ရိုက်ခဲ့လိုက်ရတယ်။ အထဲကိုရောက်လေလေ ခေါင်းတလားအပျက်တွေ များလေလေပါပဲ။ ကျောက်တုံးလေးတွေဆင့်ပြီး စေတီပုံလေးတွေ လုပ်ထားကြတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ကျောက်တုံးစေတီပုံလေးတွေမြင်တော့ တိဗက်ခရီးစဉ်ကို သတိရမိသေးတယ်။ ကျောက်တုံးလေးတွေဆင့်ပြီး စေတီတည်ကြတဲ့ဓလေ့က တိဗက်ဘက်က ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ကျွန်မက ယူဆမိလို့ပါ။
ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ ဂူထဲမှာဖြစ်နေပေမယ့် အသက်ရှူလို့ကောင်းပါတယ်။ ပေ 1800 လောက်အထိ ၀င်သွားပြီးချိန်မှာ ဆက်သွားဖို့ မလွယ်တော့ဘူးလို့ လိုက်ပို့တဲ့ကောင်လေးက ပြောပါတယ်။ သူကတော့ ရောက်ဖူးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဆက်သွားရင် ပေ ၂၀ လောက် ချောက်တစ်ခုကို နံရံကပ်ထောင်ထားတဲ့လှေခါးကနေ ဆင်းရမယ်တဲ့။ ပြီးရင် ချောင်းတစ်ခုကိုရောက်မယ်။ ပြီးရင် ဂူကကျဉ်းသွားလို့ လေးဖက်ထောက်ပြီး သွားရမယ်တဲ့။ အဲဒါကို ကျော်သွားရင် ဘောလုံးကွင်းကြီးလို လွင်ပြင်ကျယ်တစ်ခုဆီရောက်ပါတယ်တဲ့။ သူလဲ အဲဒီအထိပဲသွားဖူးလို့ ဘယ်လောက်အထိ ဆက်သွားလို့ ရမှန်း မသိပါဘူးလို့ ပြောပြပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ရပ်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာ လူငယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ရေတွေစိုပြီး ပြန်လာတာတွေ့ရတယ်။ သူတို့ကို မေးကြည့်တော့ စမ်းချောင်းအထိပဲရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လှည့်လာတယ်လို့ပြောတယ်။
ထူးခြားတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ခေါင်းတလားတစ်ခုရဲ့ အရှည်က ၁၅ ပေ လောက်ရှိလို့ သာမန်လူအခေါင်းတော့ မဖြစ်နိုင် ကြတ်တွေအခေါင်းသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆကြပြီး ကြတ်ဂူလို့ ခေါ်တယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလောက် ခေါင်တဲ့ဒေသ ဒီလောက်မြင့်တဲ့တောင်ပေါ်က ဂူထဲကို ဒီလို ခေါင်းတလားတွေရောက်နေတာ ထူးဆန်းပါတယ်။ ခေါင်းအပျက်တွေကိုကြည့်ရသလောက် ကြိုးကွင်းစွပ်နိုင်တဲ့ ချိတ်တွေ အပေါက်တွေ ပါနေတဲ့အတွက် ကြိုးနဲ့ဆွဲတင်ထားတယ်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။
ဒီလို ထူခြားတဲ့နေရာတစ်ခုကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားသင့်ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေအရ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အားနဲနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ သဘာဝအတိုင်း တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။
ကျနော် ဆို သွားဘူးးး
သွားတဲ့ သူတွေ ရှိလို့ သာ ကြည့်လို့ ရတယ်။
.ဂူကအရှည်ကြီးဆိုတော့ လင်းနို့လိုအကောင်တွေရော မရှိဘူးလား မဝေ….
.ရုံးက ပြန်ချိန်တိုင်း ရွှေတိဂုံဘုရားဘက်ကနေ ပျံပျံလာတဲ့ လင်းနို့ကောင်ရေ သန်းချီကို နေ့တိုင်းတွေ့တယ်…။
.မဝေ ကျေးဇူးနဲ့ ကြတ်ဂူထဲ ရောက်ဖူးသွားပြီ….
.မန်းလေးသွားမယ်၊ ပြင်ဦးလွင်သွားမယ်၊ လွိုင်ကော်သွားမယ်၊ စက်စဲသွားမယ်၊ ငွေဆောင်သွားမယ်၊ ဖားအံသွားမယ်…
လင်းနို့ မ​တွေ့ဘူး။ ​လေ​ကောင်း​လေသန့်​ရတယ်​။ ​မြွေရှိတယ်​လို့​တော့ ​ပြောတယ်​။
.တစ်ခြားသူတွေရေးထားတဲ့ ကြတ်ဂူအကြောင်း စာများကိုဖတ်ပီးသကာလ
​ရောက်​ဖူးမှ ​သေချာသိတာမို့လို့ သွားကြည့်​လိုက်​ပါ။
​ကြောက်​စရာမ​ကောင်းပဲ အံ့သြစရာပဲ ​ကောင်းတယ်​။
ခေါင်းတလားဆိုတာ.. ပုံbမှာပါတဲ့..ရွှေရောင်လိုလို.. သင်္ဘောလိုလိုဟာကြီးကိုပြောတာလား..။
ရှေးတုံးက..သတ္တုတွေတူးဖို့.. သယ်ဖို့.. သုံးတဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား…။
ကျုပ်များဆို.. ဇိုင်ယွန်ကင်ညွှန်ဆိုတဲ့နေရာသွားတာမှာ.. ကျောက်တောင်ကြား..ရေကလေးစီးနေပြီး.. ရေကအချိန်မရွေးတက်လာနိုင်တယ်..
ပုံတွေတော့စုံအောင်မပေါ်သေးလို့ ကြည့်ရသလောက်လေးရယ် မဝေရေးတဲ့စာရယ်ဖတ်ပြီးသကာလ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ လုံးဝမသွားတော့ဘူးလို့ ဟီးဟီး။ ယာကူစာဝေပီသပါပေတယ် သတ္တိကောင်းလိုက်ချက်
​တွေ့ခါစက အထဲမှာ အရိုးစု​တွေပါ ​တွေ့တယ်​လို့ ​ပြောကြတာပဲ။
​​အောက်​ဆုံးကပုံမှာ မပျက်​စီး​သေးတဲ့ ​ခေါင်းတလားတစ်​ခု ​တွေ့ရတယ်​။
ရွာထဲမှာ ​ကြောင်​၀တုတ်​ ပို့စ်​တင်​ဖူးကထဲက သွားချင်​​နေတာ …
ကိုနိုဇိုမိလဲ တစ်​ခါ​ရေးဖူးတယ်​ .
သွားရကျိုးနပ်​တဲ့ ​နေရာတစ်​ခုပါ ..
.“ကျွန်မအတွက် အခက်ခဲဆုံးကတော့ ဖိနပ်မစီးရတာပဲ။ ”
အဲ့ဒါပြောမလို့ ဘာဖြစ်လို့ ဖိနပ်ပေးမစီးတာလဲ
တယောက်လောက်က အမိုက်ခံစီးပြီး ဟိုဘက်ရောက်တဲ့အထိ movie လေးပါ ဆွဲလိုက်ရမှာ
ကျမသာဆို အဆုံးထိသွားဖြစ်လောက်တယ် မဝေ
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သိပ်ကြမ်းတဲ့လမ်းတွေရဲ့ အဆုံးမှာ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက တမူထူးနေတတ်လို့
ပေ ၂၀ ချောက်ကို အပေါ်စီးကနေသာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရင် အတော်လှမှာ
​လှေခါးက သစ်​သားတန်းတစ်​ခုကို အလယ်​မှာထားပြီး သစ်​သားတန်း ရိုက်​ထားတာဆို​တော့ လက်​​လျော့လိုက်​ပါတယ်​။ အ​မေ အ​ဖေ တို့နဲ့သွားတာဆို​တော့ ဒီ​လောက်​​ရောက်​ခဲ့တာ​တောင်​ ကံ​ကောင်းလို့
အဲ ရောက်နိုင်ခဲတဲ့နေရာကို ရောက်အောင် ခေါါ်ပြသွားလို့ ဇူးဇူးပါ
ငယ်တုန်းက ကြတ်ဂူ ဆိုတာ ကြားဖူးနေတာ အခုမှဘဲ ပုံ နဲ့ တွေ့ဖူးတော့တယ်။
မအိလိုဘဲ ဂူထဲ ဝင်ရဲဘူး။
တောတောင် ရှူခင်းတွေ ကတော့ လှတာ တစ်အားဘဲ။
ပုံ(၂) မှာ ဘုရားလေး လား။
လှေကားအတက်မှာ တော်တော်လေး မောသွားတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာတင် လှည့်ပြန်ချင်နေပြီ။
မှောင်မှောင်မဲမဲမှာ ခေါင်းတလားတွေ တွေ့ရင်တော့…. အမငီးးးးးးးးးးးးး :'(